idivayisi kokulandela Real-time ukuphathwa izimoto yakho
umlawuli ku 18-07-31
imoto yethu Tracker ihlanganiswe ngokuphelele ne-software Jointech. Ungakwazi ukuqapha izimoto zakho ngesikhathi yangempela ye-GSM / GPRS Ukusabalala futhi uma imoto yakho ihamba ngaphandle GSM / GPRS Ukusabalala, idivayisi silondoloza idatha wemoto kumemori layo langaphakathi nedatha zomlando ukulayisha imoto, lapho ikhava elilandelayo ...
Isicelo GPS module e Logistics Ilokhi elekthronikhi
I Logistics Ilokhi elekthronikhi uhlobo zokuphepha imishini ukuvikelwa okuyinto luhlanganisa GPS ukuma, zokuxhumana ezingenazo izintambo inethiwekhi kanye RFID technology. It is ikakhulukazi elisetshenziswa ukuqapha impahla ephathekayo noma izihloko. Ezinjalo njengoba Logistics, ezimotweni zokuthutha nezimbobo, isitsha ezikhumulweni. ...
Yiziphi ngezinhloso akude ukuqapha izidakamizwa?
Njengoba kuzwakele kubo bonke, izidakamizwa emafektri zihlukaniswa kusuka kwamanye amasayithi. Ngoba basuke egcinwe njengoba imikhiqizo kwamakhemikhali, izimfuneko lokushisa kwemvelo kanye nomswakama zibukhali kakhulu. Uhlelo izidakamizwa lokuqapha eyihlane libhekisela computer njengoba umzimba omkhulu, kudivayisi ukuthola ehlangene ...
Yiziphi izimfuneko amasiko esitsheni kokuqondisa?
Yiziphi izimfuneko amasiko esitsheni kokuqondisa? Esihlokweni lolu daba sika, Xiaobian Jiutong IoT sika uyokwethula inkulumo nawe kuwo wonke umuntu: 1. Isakhiwo ibhokisi (imoto) kuyinto Friend kanye ephelele, futhi uphawu ingxenye ibhokisi (imoto) singasetshenziswa nge amasiko lwezimpawu. Uma izimpahla a ...
I Intermodal Aisa 2018 wabona ukuvulwa grand e Shanghai Expo ngo-Ephreli 20. Lokhu setfulo izogxila ithuba elikhulu ngaphansi zangokwasemuva zezinhlelo "Omunye Belt futhi Road", clustering yasekhaya futhi global ubuchwepheshe obusha kanye nemikhiqizo kwabanye izimboni ezihambisanayo, ezifana aqukethe ...
Isitsha Tracker kanjani ukuphatha imoto Logistics?
Okokuqala, Logistics umsebenzi ubhekana nenye inkinga? 1, indlela ukuqinisekisa ukuphepha izimpahla, izimpahla, ngokuvumelana Midway athula kude? 2, nendlela yokuzigwema ukuze zingasivimbi umshayeli engozini ukushayela, ukweba nokuphatha uphethiloli, ukusetshenziswa yangasese ye ibhasi, ukudonsa nokuphila kwangasese? 3. Indlela ukuqonda isikhundla t ...